Uzbekistan dia mijery KLM hisarika ny mpizahatany eropeana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Uzbekistan dia mijery KLM hisarika ny mpizahatany eropeana
Desambra 29, 2018
Araka ny ambaran'ny masoivohon'ny Ozbekistan any amin'ireo firenena Benelux, Dilyor Khakimov, kaompaniam-pirenen'i Nederlandy, KLM Royal Dutch Airlines dia mikasa ny hanao fiaraha-miasa codeshare ao Ozbekistan.
Mampifandray an'i Amsterdam sy Azia Afovoany, Azia Atsinanana, ary India amin'ny alàlan'i Uzbekistan izany.
Araka ny tatitra nataon'ny Trend News Agency, nihaona tamin'ny Tale Alliances ao KLM Jan Vreeburg i Uzbekistan.
Ny antoko dia niresaka ny fanantenana hanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina eo anelanelan'ny Ozbekistan sy ny Netherlands. Ity dia fotoana vaovao hiseho miaraka amin'ny fanalalahana ny indostrian'ny fizahantany any Ozbekistan.
Nanamarika ny masoivoho fa afaka manomboka fifampiraharahana amin'ireo manampahefana holandey ny Uzbekistan Airways amin'ny mety hanombohana sidina mankany Amsterdam amin'ny vanim-potoanan'ny Ririnina 2019/2020.
Ireo antoko ireo dia nanohana ihany koa ny hevitra hananganana sidina mankany Ozbekistan avy amin'ireo kaompaniam-piaramanidina mpiara-miasa, ao anatin'izany ireo kaompaniam-piaramanidina lafo vidy izay mankany Schiphol. Izany dia hampitombo be ny isan'ny mpizahatany avy any Netherlands sy ireo vavahady eoropeanina hafa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny vidin'ny fitsangatsanganana mankany Ozbekistan.
Nisondrotra ny fizahan-tany any Polonina tamin'ny taona 2018
Tahotra amin'ny fifidianana any Bangladesh: Hotely banga amin'ny vanim-potoanan'ny mpizahatany